Bonke abazali kakhulu sensitive isimo sobuso ngayinye lembuzi, isenzo sakhe njalo kukhona. Futhi izwi lokuqala eyashiwo kubo, aziholele e injabulo engachazeki. Phela, kusukela izwi lokuqala luqala isigaba esisha ekukhuleni kwengane. Kuzothatha eziningi umzamo nokubekezela ukuze abazali ukulinda efanele futhi enengqondo inkulumo ingane.
Ukuphimisela amagama anzima, kuyadingeka ukuzivivinya ukuze izindebe nolimi. Kumele babe ukuzivumelanisa nezimo ukuze okuhle namandla.
Ingane bafunda ngokushesha ukulibiza imisindvo inkimbinkimbi, kukhona okuthiwa ukuhambisana umzimba for izingane. Lokhu obonisa ungasebenzisa uma ngeziphambeko sína pronunciation nge inkulumo ukukhubazeka, kanye zvukoproiznosheniya egwinya.
Ikakhulu izingane ezingaphansi kweminyaka ezintathu nobunzima e yokubiza amagama anzima, uhlele emalunga, usike kubo. Nokho, ningatatazeli. Lokhu kuvamile. Kodwa uma lesi simo sengqondo esalibele kuze Mayelana nokwenzeka kamuva, kufanele ubheke Ochwepheshe.
Kuhambisana umzimba for kids isidingo sokuqala ngenxa yezizathu eziningi. Okokuqala, amasu zisenza ukufunda izivivinyo ezifana, ikhuthaza izingxoxo ilungile futhi kucace ngaphandle kokungenela of onguchwepheshe. Okwesibili, guys abakade ukuphambuka ezinkulu e yokubiza umsindo ngokushesha alungise enamalimi, asesebenzisa ngosizo nodokotela osiza abanezinkinga zokukhuluma. imisipha yabo izicubu ayovulelwa futhi abaqeqeshiwe. Okwesithathu, ukuhambisana umzimba izingane inenzuzo enkulu kulabo nge pronunciation ukungacaci. Futhi ekugcineni, Okwesine, ukuthi ufundisa yokuzijwayeza pronunciation enhle, ecacile futhi zilungile.
Ukuze kuzuzwe imiphumela emihle, kudingeka ulandele abanye izincomo ngokuhamba izivivinyo. Isimo eyinhloko amaseshini njalo ehleliwe. Lokhu kuzovumela ingane ukuhlanganisa le nemakhono labawatfolile. umzimba engaphezu kwengamashumi amathathu ngesikhathi is hhayi Kunconywa ukuba anikele umntwana. Kuhambisana obonisa yokuzijwayeza kudingekile ukwenza okungenani emihlanu kube izikhathi eziyisikhombisa.
Zonke izinhlobo umzimba okufanele wethulwe ingane thize, ukusuka kokulula kuya kokulukhuni ngaphezulu. La makilasi kungcono sishintshe sibe uhlobo umdlalo. intshiseko Ngokomzwelo ezisuka kusukela lokhu izingane, kuholele ithembeke fix Gymnastic umzimba. Uma ingane alinikwa kahle yimuphi umsebenzi, okokufaka entsha akuyona kuze kube foothold ngokwanele ubudala. Ukuze wenze lokhu, kudingeka beveza indlela lensha, ukuza ngaphesheya ukuba le nkinga.
Bonisa ezifanele ukwenza ehlezi. Lesi simo ikuvumela ugodle zakho ziqonde, umzimba ekhululekile, izingalo nemilenze ukuzola.
Ubuso ingane kuyakuba ubuso omdala, ukuze ungakwazi ukulisebenzisa ukulawula ukukhishwa izivivinyo. Futhi ukuhambisana umzimba izingane kwenziwa ngosizo esibukweni. Lo mbono ivumela ingane yakho ukuba ugxile inkulumo yami ebusweni, izindebe, ulimi, ukuphinda ukunyakaza omdala. Ngemva kwalokho, esibukweni kungaba zisuswe.
Ungadumali uma okokuqala ngesikhathi ingane into akusebenzi. Kunalokho, kumelwe akwenze kucace enganeni yakho ukuthi omdala kakhulu, akuzona zonke kuvela.
Kufanele ukhethe umsebenzi ukuthi ukuthuthukisa izwi, ukuphefumula, inkulumo ukuzwa. Lena isikhashana kubaluleke kakhulu ukubizwa okufanele kwamagama.
Kuhambisana umzimba indlela enhle yokufeza imiphumela emihle esikhathini esifishane kanye ukuthola esifike ukuhlukahluka pronunciation.
Injongo ukuhambisana umzimba - ukuthuthukisa ecacile futhi efanele ukusebenza Retschow apharathasi luphinde imisebenzi yayo nezinye izinhlangano, ikhono ukuhlanganisa ukunyakaza okulula eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Lungisa futhi sakheke kahle inkulumo - iyona inkomba eyinhloko ukulungiselela kahle wengane yesikole.
Massage embhedeni "Nuga Kuhle": yokusetshenziswa futhi impendulo